Xulashadayda buugaagta sanadka. Dib u eegis | Suugaanta Wararka
Suugaanta hadda jirta
Xulashadayda buugaagta sanadka. Dib u eegis
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 27/12/2021 12:00 | Maadooyinka, Qorayaasha, Buugaag, Novela, Riwaayad madow, Sheekooyinka
2021 wuu dhamaanayaa. Sannad kale oo wax-akhris ah, in ka yar intii ay noqon lahayd, laakiin had iyo jeer lagama maarmaan noqoto. Si kastaba ha ahaatee, waa laga yaabaa in aan da'da, laakiin in muddo ah hadda farta aan on tablet-ka iyo gacmahayga on warqada ma gariiraan markii aan bilaabay mid ka mid ah oo ay igu qancin. Inta aanan dedaalin oo aan dhamayn. Waan ogahay waxa ay tahay in la qoro buug iyo saacadaha iyo habka shaqada leh ee wax-soo-saarka iyo kor u qaadida si loo gaarsiiyo akhristaha. Laakiin hadda ... Si kastaba ha noqotee, waxa la sheegay, waxay ahaan doonaan da'da sidoo kale ogow in aysan jiri doonin waqti maadi ah oo aad ku akhrido wax kasta oo aad jeclaan lahayd. Xulashada buugaagtani waa mid gaar ahaaneed, si aan u caddeeyo, laakiin waxaan sidoo kale iftiimin doonaa dhowr kale oo hore loo dhajiyay. Waxaan rajeyneynaa in sanadka soo socda uu sii wadi doono inuu noo keeno sheekooyin wanaagsan. Farxad 2022!
Marka hore waxaad tidhaahdaan, mahadsanid inta bogsatay buugga Carwo ka yimid Madrid, Waxaan awooday inaan salaamo oo aan ugu hambalyeeyo qaar ka mid ah qorayaashan sheekooyinkan la doortay, sida Domingo Villar, Daniel Martín Serrano ama Iñaki Biggi.
1 Akhriska sanadka
2 Xusuus gaar ah
3 Iyo Manuel Bianquetti
Boqortooyada - Jo Nesbø
Tani waa horyaal caalami ah oo aan la sii joogo. Yaab yar, marka la eego in kaniisadda caadiga ah ee i akhridaa ay meel fog ka ogtahay in Jo Nesbø uu yahay daciifnimadayda.
Waana tan magac qaran oo aan iftiimiyo ee sanadkan. Soo-bandhige-nololeedka-maaha-suugaan-- ee qoraaga qoraalka, qoraaga iyo macallinka oo aan awoodin in uu sameeyo bandhig wanaagsan.
Qoob ka ciyaarka waalan - Victoria Mas
Waxa aan lahaa daabacaad aan venal ahayn oo hadyad ahaan saaxiibkay, waxaanan soo qaaday hal galab. Aan caadi ahayn sheeko cusub oo ay qortay qoraaga faransiiska ee Victoria Mas oo qalbigayga taabtay iyo waan ku talinayay sanadka oo dhan. Xooggiisa, canaantiisa iyo muuqaalkiisa bulsho ee xilli.
Qaar ka mid ah sheekooyinka oo dhammaystiran - Domingo Villar
Ma aha war ah in wax uu qoray Domingo Villar uu wanaagsan yahay, oo ah qaab sheeko 600 bog ah ama tales kuwan oo kale. Sawirada sida quruxda badan sida saaxiibada kaliya ay kuu samayn karaan, natiijadu waa akhrin galab ah oo ku buuxinaysa khayaali, shucuur iyo nostalgia.
Dhimo november - Guillermo Galván
A Carlos Lombardy, Guillermo Galván, oo ahaa booliiskii hore wuxuu isu beddelay dembi-baare gudaha Madrid, waan la kulmay sannadkii hore waanan jeclaa isaga. Sheekadan saddexaad waxay leedahay sidoo kale. Iyo in ka badan qorshaheeda, trilogy-kan ayaa ii taagan aniga goob wanaagsan ee Madrid afartanaad iyo kuwa hodannimada style qoraalkaaga.
Blacksad 6. Wax walba way dhacaan, qaybta koowaad - Juanjo Guarnido iyo Juan Díaz Canales
Labaatan sano ayaa jacaylka taxanahan sheeko garaafeed leh - oo leh 6 cinwaan oo keliya - iyo baaraha sida caadiga ah maadaama uu yahay mid naxdin leh John blacksad, in protagonist bisad weyn anthropomorphic madow. Sheekadiisa lixaad ma hungowdo 22-kiina xaraashiisa ayuu noo keenayaa.
Xusuus gaar ah
Mashruuca Muuse - Iñaki Biggi
Isaga ayaan sanadka ku bilaabay wax ka fiicanna ma qaban. Abaalmarin aad u weyn oo ka timid qoraaga San Sebastian sheekooyinka filimaanta dagaalka ee lagu dejiyay Koobkii Adduunka Labaad ee leh cinwaanno ay ka mid yihiin Laba iyo toban ka soo jeeda godka (Tixraacaaga ugu cad) ama Waabiyada Navarone.
Wiilka bobbins leh - Pere Cervantes
Dhaqdhaqaaqa oo waara isla mar ahaantaana sheeko-yaqaankan oo wata a Sawirka quruxda badan ee Barcelona ka dib, iyada oo sidoo kale abaal-marin loogu talagalay shineemo, jilaa weyn iyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna xun xun ee nooca.
Iyo Manuel Bianquetti
Hagaag haa. Aad bay ii daah-furtay inaan akhriyay Dhaqdhaqaaqa qoolleyda y Musiibada Sunflower oo soo ogow halyeygeeda, Manuel Bianquetti aadka u weyn ee dareen kasta uu abuuray Benito Olmo. Akhri (ama halkii la cunay) in ka badan toddobaad gudihiis, Bianquetti waxa ay u gurguurtay liiskaas gaarka ah ee jilayaasha nooca ee isla markiiba la qaado. qayb ka mid ah qalbigayga madow. Sannadkan sidoo kale waan akhriyay warkaaga, Casaanka weyn, oo leh jilaa kale oo soo jiidasho leh. Laakiin xaqiiqdii waxaan la joogayaa Bianquetti.
Sidoo kale, ugu fiican ayaa la sameeyay isagoo awooday inuu shakhsi ahaan kuu sheego a Benito Olmo oo ogaada waxa jiri doona nooca filimka mar horeba wax soo saar iyo kabka taas oo, dabcan, ku dhufatay ugu yaraan iconography aan mala awaalay sax.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Xulashadayda buugaagta sanadka. Dib u eegis
Buugaagta Elena Ferrante
Sida buug loo qoro oo loo daabaco
Ku hel wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan buugaagta iimaylkaaga
1 milyan oo buug oo lacag la’aan ah aalad kasta?
Isku day bilaash!